DIGIC ပြက္ခဒိန် Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » DIGIC ပြက္ခဒိန်
DIGIC ပြက္ခဒိန် APK ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒိုင်ယာရီစီမံခြင်းနှင့်စည်းရုံးရေးမှူးမျိုးစုံပြက္ခဒိန်အမြင်များ, စတိုင်ပြက္ခဒိန် Widgets နဲ့သင့်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်မြန်ဆန်ထိရောက်အချိန်ဇယားဆွဲဘို့ဘက်ပေါင်းစုံကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ကမ်းလှမ်း!
•ပိုပြီးအဆင်ပြေ7ပြက္ခဒိန်အမြင်များ (နေ့, သီတင်းပတ်ကတပတ်အစီအစဉ်, ပုံတူများနှင့်ရှုခင်း mode မှာတစ်လပြက္ခဒိန်, စာသားလတနှစ်နှင့်စာရင်းမြင်ကွင်း) အကြားသို့ပြောင်းပါ။
•ယင်း slick မှောင်မိုက်ဆောင်ပုဒ်နိမ့်အလင်း settings ကိုနှင့်ညဉ့် mode မှာပိုကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
•အားလုံး 27 ဘာသာစကားများရရှိနိုင်ကိုက်ညီပွဲ keyword ကိုပုံရိပ်!
•ကွဲပြားခြားနားသောဆောင်ပုဒ်စတိုင်များနှင့်အမြင်များနှင့်အတူ6အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက် Widgets တွေ: (အခမဲ့: စာရင်း, နေ့, နေ့စာရင်း, နေ့ဇယားကွက် Widgets တွေ, Premium: တစ်လနှင့်တစ်လပြက္ခဒိန်ဝစ်ဂျက် -text2အပို Widgets တွေ)
• zoomable နေ့နှင့်ရက်သတ္တပတ်အမြင်နှင့်အတူရက်ပေါင်း, ရက်သတ္တပတ်များနှင့်လများအကြားအလိုလိုအညွှန်း။
•အားလုံး devices တွေကိုဖြတ်ပြီးနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Google ကပြက္ခဒိန်, Outlook.com နှင့်ချိန်းအဖြစ် Android ပေါ်မှာထောက်ခံသမျှသောပြက္ခဒိန်ဆာဗာများနှင့်အတူ Sync,
• Google မှပြက္ခဒိန်နှင့်အတူချောမွေ့စွာဖြစ်ရပ်အရောင်ထပ်တူပြုခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ဖြစ်ရပ်များအတွက် DIGIC ရဲ့ Pre-set ကိုအရောင်များကိုရွေးချယ်ပါ,
•ပိုမြန်အချိန်ဇယားဆွဲဘို့ပေါင်းလိုက်သောနေ့စွဲ & အချိန်ရွေးသူ,
•အလွယ်တကူဒေသခံနှင့်နိုင်ငံခြားနှစ်ဦးစလုံးအချိန်ဇုန်အတွက်ရက်စွဲနှင့်အချိန် display နဲ့အတူမျိုးစုံအချိန်ဇုန်ကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်ရပ်တစ်ခုအချိန်စာရင်း
• Google မှနေရာများအော်တိုပြီးဆုံးနှင့်အတူပိုမိုမြန်ဆန်လိပ်စာ entry ကို,
•ခဏ, စီစဉ်ခြင်းနှင့်ဖြတ်, မိတ္တူ, ငါးပိ function ကိုနှင့်အတူပြန်လည်သတ်မှတ်
• organizer မှ RSVP နှင့်ပြန်ကြားချက်နှင့်အတူဖိတ်စာများသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၌ရှိသမျှသောဧည့်သည်များကိုစီမံခန့်ခွဲ,
•အားလုံးပြက္ခဒိန်အမြင်များနှင့် Widgets တွေအတွက်အခမဲ့3ရက်ကြာပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရာသီဥတုအလားအလာ,
•တစ်မှေးအိပ်, မြေပုံနှင့်အညွှန်းများအတွက်အမြန်အရေးယူခလုတ်နှင့်အတူ Pop-up, ကြော်ငြာစာ,
• 27 ဘာသာစကားများရရှိနိုင်။
။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုအကောင်းဆုံးအချိန်ဇယားဆွဲအတွေ့အကြုံကိုယူလာရန်ဆက်ကပ်အပ်နှံတဲ့အသေးစားနှင့်လွတ်လပ်သော app ကိုဆော့ဖ်ဝဲရေးသူဖြစ်ကြ၏။ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုရန် DIGIC + သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့ကိုအချို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြပါ။
။ အပိုဆောင်း features တွေရဖို့ DIGIC + သို့ Upgrade:
-2အပို Widgets တွေ: တင့်တယ်လနှင့်လပြက္ခဒိန် widget က
- ပြက္ခဒိန်ရွေးချယ်ရေး: Select လုပ်ပါကသင်၏ Widgets တွေပေါ်ဖော်ပြရန်ပြက္ခဒိန်အရာ
- အပိုပြက္ခဒိန် widget ကဆောင်ပုဒ်စတိုင်များနှင့်စာလုံးအရွယ်အစားကို pre-အစုံ
- ပြက္ခဒိန် Widgets တွေအတွက်စာသားကိုအရွယ်အစား, စတိုင်နဲ့အရောင်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်
- ပြက္ခဒိန်အမြင်များစိတ်ကြိုက် 42 ဆောင်ပုဒ်အရောင်များ
- အခမဲ့ / အလုပ်များကာလအစက်စက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်များအတွက်အပူမြေပုံနှင့်အတူတစ်နှစ်တာအမြင်
- စိတ်တိုင်းကျတစ်မှေးအိပ် options များ
။ အပိုဆောင်းရာသီဥတုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပရီမီယံရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် (နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်း in-app ကိုဝယ်ယူ) Subscribe to:
- 15 ရက်ကြာရာသီဥတုအလားအလာတိုးချဲ့။
- Interactive မှအပူချိန်နှင့်မိုးရွာသွန်းမှုဂရပ်။
- အမြန်မိုးလေဝသတည်နေရာ access များအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးတည်နေရာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းပါ။
။ သငျသညျအကူအညီလိုအပ်သို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မျှဝေချင်ပါသလား? Digibites.zendesk.com/hc/en-us/requests/new မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရသည်။
။ Digibites.zendesk.com/hc: လဲ tutorial နှင့်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအဘို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုစာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်ကျေးဇူးပြုပြီး
။ ကခြင်းမရှိဘဲ, ငါတို့အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဧည့်သည်များ၏အမည်များအတွက်အော်တိုပြီးဆုံးမပေးနိုငျသညျ, မဟုတ်သလိုဖိတ်စာနှင့်အတူဖြစ်ရပ်များအတွက်မိမိတို့၏ပရိုဖိုင်းပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြရန်အဖြစ်ဖတ်အဆက်အသွယ်ခွင့်ပြုချက်, ဧည့်သည်များဖိတ်ခေါ်ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ "
။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: Bit.ly/1oq9i4C